Voadika ny 22 Janoary 2013 17:13 GMT
Nihevitra i Bahrain fa mandry fahalemana ihany mba hahafahany manatontosa hetsika ara-panatanjahatena rezionaly, kanefa notafiihan'ireo lehilahy mpiambina ny vehiivavy iray mpanao fihetsiketsehana tao Manama, afovoan'ny renivohitra. Tamin'ny volana Jolay farany teo, navotsotra tany am-ponja i Zahra Al-Shaikh rehefa notànana sy nampijaliana. Nilaza izy, taminà resadresaka niarahana taminà mpanao gazety Bahrainita mialokaloka any Lamees Dhaif fa teren'ny polisy hiara-hiasa amin'izy ireo izy. Tamin'izany fotoana izany, nosamborina tao anatin'ny fihetsiketsehana nandritra ny kilalao fifaninana baolina kitra ho an'ny firenena Golfe i Zahra, ny ekipa Emirà Arabo Mitambatra no nibata ny fandresena tamin'izany. Niely tamin'ny aterineto nandritra ny andron'ny lalao famaranana tamin'ny 18 Janoary ny vaovao, sary sy ny lahatsary momba ny fisamborana azy.
Mohammed, mpisera Twitter Bahrainita, nisioka izay natrehiny maso:
@ba7rainiDXB: Vehivavy iray novelezin'ireo mpikarama an'adin'ny governemanta #Bahrain tao afovoan'ny renivohitra #Manama. Tanora sy lehilahy no mifanandrina amin'izy ireo.
Marobe ireo sarin'i Zahra nalefa tao amin'ny Twitter saingy tao anatin'ny fotoana fohy, nofafan'ireo mpiserasera ny sariny – izay mampiseho azy tsy misy sarondoha, ho fanajana. Ho solon'izany, ireo sariny misy ny volony mainty no navoaka::
“@SafaMohammed: ilay vehivavy nosamborina tao #Manama #bahrain, noesorina ny sarondohany ary mandeha rà ny vavany!!”